Kobaca Garashada iyo Fahanka | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Tuke Somalism, February 3, 2016
Abshiro Axmed Cabdi — July 7, 2019
Fahanaku Miyuu yahay goob ku takhasustay daraasadda cilmi-nafsiga iyo dareenka ee bini-aadanka gaar ahaan ilmaha, wuxuuna diiradda saaraa daaweynta dhammaan macluumaadka iyo ilaha la xiriira fikradaha qaarkood, marka lagu daro xirfadaha garashada, waxbarashada iyo dhinacyada kale ee toos ula xiriira horumarka maskaxda ilmaha, marka la barbar dhigo dadka waaweyn.
Wareegga Awooda Dareenka
Heerka koowaad ee kobcinta fahamka oo ka bilaabmo dhalashada kuna dhammaata da’da labi iyo toban, inta uu qofkaasi u dhaqmo sida fikradihiis iyo caqligiis, wuxuuna isku dayaa inuu dhexgalo bulshada, si uu u metalo dunida.
Laga soo bilaabo da’da laba iyo tobnaad ilaayo dhammaadka lix iyo tobankaiyo. fekerka bani-aadmigu u hoggaansamo ruux maskax. kan ugu horreeya waa marka ilmuha lasiiyo waxyaabo muhiim ah oo ku saabsan dabeecadaha gaarka ah bini aadamka, iyada oo loo eegayo dareenka iyo haysashada fikradaha. xitaa ujeedooyinka, Midka labaad waa inuu ilmuhu ku qanacsanaado aragtidiis ee wax kasta oo ah waxa ku hareeraysan, oo uusan aqbalin ra’yiga dadka kale.
Dad badan ayaa isku dayaya inay noloshooda si xor ah u noolaadaan iyada oo aan loo fiirsanin. Habada Ku xoree nolashaada qodabadaan:
Waxay jecel yihiin aamusnaan: Cilmi-baadhistu waxay muujisay in dadka aamusnaanta ah ee jecel inay aamusnaanta leeyihiin uu sirdoon koodu ka sarraysa kuwa had iyo jeer jecel inay hadlaan; waxay u fakaraan ereyadooda ka hor inta aan dadka kale ka jawaabin ay ka fogaadaan wada sheekeysiyada aan habooneyn.
Waxay leeyihiin fikrado badan iyo mashaariic: waxay mar walba ku mashquulaan shaqo badan, dhaqdhaqaaqyo iyo fikrado, sida barashada luqad cusub, barashada ciyaaraha muusikada, akhrinta buug cusub, iyo haysashada fikrado badan.
3. Waxay jecel yihiin dheela mashada: Cilmi-baaristii dhawayd waxay soo jeedinaysaa in dadka raba in ay soojeedaan habeenki oo ay sameeyaan shaqada ku habboon habeenkaas.
Waxay ka fiicnaadaan dadka maalinti shaqeeyaan. sababtoo ah waxay isticmaalaan fekerada dadka ku hareeraysan si ay hormar ugaaran iyaga oo akhriya macluumaadka, raadinta fikradaha, Baro luqad cusub.
4 – waxay wajahaan dhibaatooyinkooda: Qofka caqliga leh ayaa dhibaatooyinkiisa wajahaya bilowga xitaa haddii ay badan yihiin, waxuu ogyahay sida loo go’aamiyo mudnaanta iyo tallaabooyinka lagu xalinayo, haddii aad ka mid tahay noocan aad baan kugu hanbal yaynayaa.
5- waxay Isku daboolaan si caqli leh oo hal abuur leh: Inta badan dadku waxay doonayaan inay isku darsadaan oo ay la socdaan kuwa caqliga leh, hal-abuurka iyo wax barashada, dabcan waxaa jira qaar ka reeban, laakiin haddii dadka intiisa badani ay yihiin kuwo caqli-gal ah waxaad ku jiro dad kale.
Sida lagu garto hormarkaaga:
Xaqiiji in aan lagaa baadhi karin heerka sirta. Qaar ka mid ah dadku waxay aaminsan yihiin in aysan samaynin wax tijaabo ah oo ku saabsan noloshooda inta lagu jiro cimrigoda. laakiin mararka qaarkood dadku waxay sameeyaan baaritaano sirdoon ah markaad dalbanayso shaqo ama markaad ku biireyso kooxa cusub waxaa laga rabaa in aad imtixaan ugasho oo ku soo gudubtid.Haddii aad imtixaanka horey u sameysay, Kala hadal qofka ku tijaabashay oo natiijada kahayo.
Tags: Kobaca Garashada iyo Fahanka
Next post Sidee Loo Hormariyaa Sirdoonka Nolosha?
Previous post Dhibatoyinka Ardayda Soowajaho Xiliga Waxbarashada